Izithiyo ezihamba phambili zezinja - Konke Odinga Ukukwazi! | Izinja Umhlaba
Izithiyo zezinja zingenye zezinto zokuphepha sidinga kangakanani. Hhayi bona kuphela kodwa nathi noma ikhaya lethu. Ungumphelelisi owaziwayo, kepha namuhla uzothola okuningi ngabo, ngoba yize bekubonakala kunje, ubungazi konke ngale nto.
Ngemigoqo yenja ungakha isikhala esilinganiselwe ekhaya lakho, ukuze izilwane ezifuywayo zingakwazi ukudlula noma nini lapho zifuna. Njengoba ezinye zingadala umonakalo othile futhi asifuni lokho ikakhulukazi uma singekho ekhaya. Ngakho-ke, kuqala, izithiyo ziba ngqangi. Ungaphuthelwa yikho konke okulandelayo!
Isithiyo se-Hauck ...
Iris Ohyama, iSango le ...
I-Trixie Extendable Barrier ...
I-Pawhut Barrier ye ...
1 Kungani uthenga umgoqo wezinja?
2 Izinhlobo zezithiyo zezinja
2.4 Ngaphandle kwezikulufo
3 Ungasikhetha kanjani isithiyo senja kahle
4 Ingabe kufanelekile ukuthenga umgoqo wezinja?
5 Ungathenga kuphi umgoqo wezinja oshibhile
Kungani uthenga umgoqo wezinja?
Guqula igumbi endlini lingene egumbini lakho: Enye yemibono emihle ongayiqhamuka sibonga umgoqo wezinja yile. Cabanga ukuthi unekamelo elincane kodwa awuqiniseki ukuthi ungenzani ngalo. Ukuba nesilwane, imibono ingahle isivele igxume ngaphandle kokukwazi ukukugwema. Ukuze ungayisebenzisela ukunciphisa igumbi elishiwoyo, ukulihlukanisa libe izingxenye noma, ukulibeka engxenyeni yomnyango bese ushiya isikhala esengeziwe sezilwane ezifuywayo. Njengoba kwesinye isikhathi akudingeki ukuthi kube yigumbi uqobo, kepha indawo esingayisebenzisi noma siyisebenzise ngokunenzuzo.
Vimbela ukuthi bangene endaweni yendlu: Omunye wemisebenzi ebalulekile izithiyo ezinayo yile. Ngoba uma sizishiya, izilwane ezifuywayo zizongena ziphuma emakamelweni ahlukene usuku lonke. Bathanda ukuthola ukuthi yini ekulo ngamunye wabo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uma ufuna ubavimbele ekuzuleni endlini, beka izithiyo kuleyo minyango noma ezindaweni ezizovunyelwa bona. Ukuze ivimbe indlela yabo nokuthi akukho abangakwenza ukukulungisa.
Vimbela ukuthi bangehli benyuka izitebhisi: Lapho kunezitebhisi maphakathi nendlu, kufanele ngaso sonke isikhathi sisebenzise ukuqaphela okukhulu. Ngoba uma sikwenza nezingane, nezilwane ezifuywayo futhi. Kulokhu ngoba lizinkinga zempilo zingase zibe yinto evamile futhi asifuni ukuthi amalunga akho ahlupheke. Ngakho-ke, ukugwema izilingo, ngaso sonke isikhathi kungcono ukuzivimbela ngale ndlela futhi kunemingcele yezinja.
Vimbela ukuthi bangaphumi ngaphandle: Ikakhulukazi imidlwane iyona engenakho ukuthula futhi kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi asikwazi ukuyilawula ngendlela ebesingathanda ngayo. Ngakho-ke, kufanele sicabange ngezindlela ezithile ukuze sikwazi ukulawula kahle ngaso sonke isikhathi. Izithiyo futhi zivimbela ukunganaki ekubeni khona futhi ngenxa yalokho, ukuthi bangaya phesheya. Singazigcina ziphephile njalo lokhu kusenza siphefumule kalula.
Izinhlobo zezithiyo zezinja
Ingenye yezinhlobo eziyizintandokazi ngabaningi ngoba njengoba igama layo libonisa, ingenziwa ibe banzi noma ibe ngaphansi. Yini esitshela lokho ingafakwa ezikhaleni ezahlukahlukene futhi leyo yinto esiyithandayo. Izolungiswa kububanzi obuhlukahlukene beminyango, njengoba siyidinga, sikwazi ukuyenza incane.
Ukuphepha 1st Easy Close ...
Uma ucabanga ukubeka umgoqo wezinja ngaphandle, khona-ke insimbi ingenye yezindlela ezingcono kakhulu. Zimelana kakhulu nalesi sizathu, ukuzibeka ngaphandle, kepha hhayi lokho kuphela kepha nazo zonke lezo zinja ezithanda ukubhuza. Ngoba ngokuqeda okunje bazoba nakho kube nzima kakhulu. Futhi ilungele izinja ezinkulungqo ngenxa yalokhu kumelana esishilo.
Ukucabanga nje ngezithiyo ezithile zokhuni, siyakwazi lokho umhlobiso wekhaya lethu uzosibonga. Ngoba izinkuni zilungele ukuhlanganiswa kuwo wonke amagumbi endlu. Ngakho-ke, kungenye yalezi zinketho ezinhle ngakolunye uhlangothi kepha futhi kuyasebenza kolunye. Njengoba zizogcina isilwane sakho sivikelwe kahle. Yize kuliqiniso ukuthi abanye bakhetha ukuzinwaya noma ukuziluma.
Sihlala sinezinketho ezahlukahlukene kakhulu zokuthokozela izinzuzo ezinhle kakhulu. Kulokhu, sikhuluma ngakho izithiyo ezingenantambo. Isixazululo esifanelekile sokugwema ukubhola izindawo zasekhaya. Kungcono ukuya ukuthola umbono onje oza ngaphandle kwezikulufo. Imvamisa zihambisana nohlobo lwezinkomishi zokudonsa nezinye izingwegwe ezizozijoyina. Ngakho-ke izozama ukunamathisela nokususa lapho uyidinga. Njengoba ngale ndlela kuzokusiza ukuthi ushintshe izindawo ngokuya ngezidingo zakho nalezo zesilwane sakho.
Ungasikhetha kanjani isithiyo senja kahle
Material: Ingelinye lamaphuzu abalulekile okufanele uwacabangele. Okuqukethwe kuzonquma amandla nokuqina kwesithiyo senja, ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi sikhethe kahle kakhulu. Lezi zensimbi zingenye yemibono emihle yalokhu kumelana esishilo, impela uma ufuna ukuthi ihambe ngokuvumelana nomhlobiso wakho, mhlawumbe owokhuni yiyona okhonjiswe kakhulu. Kufanele ucabangisise ngokufunayo noma ngokufanele ngaphambi kokuthatha isinyathelo.
Ukuphakama: Isici esibalulekile lapho zikhona ngoba sidinga ukuthi izilwane ezifuywayo zibekwe lapho kufanele zenze khona lokhu, okokuqala kumele sicabange ngosayizi wesilwane. Ngoba lapho sizonquma ukuphakama kwesithiyo. Ngokunengqondo bazoba ngaphezulu kancane uma sikhuluma ngenja ephakathi noma enkulu ngosayizi. Kepha kwabancane, abadingi ukuphakama okungako ngoba ngeke babaleke.
Ububanzi: Lapha, ukuthola ukuthi imigoqo yezinja zethu kufanele ibe banzi kangakanani cabanga ukuthi sizobabeka kuphi. Ngoba kwesinye isikhathi zizoba seminyango noma emengamo esebenza njengokungena, ngakho-ke lapho kuzofanela silinganise ububanzi bazo. Kepha uma kuzokwehlukaniswa izikhala, khumbula ukuthi ububanzi buzokuba bukhulu. Ngakho-ke, kufanele ngaso sonke isikhathi sithathe izinyathelo kahle ukuze singasweli futhi singapheli.
Uhlelo Lokulungisa: Lapha izidingo zakho ziqala ukudlala futhi. Ngoba uyakwazi ube nezithiyo zenja ezinezikulufo ezizolungiswa kahle noma ngakolunye uhlangothi, izinkomishi zokudonsa. Ngakho-ke kulokhu okugcina akusadingeki ukuthi ubhoboze udonga noma umnyango uqobo. Yize kuliqiniso ukuthi okuvame kakhulu yikhona okubhoshwayo, ngoba okunye kuvamise ukuba sezindaweni ezifana nezitebhisi.
Uhlelo lokuvula ukuphepha: Yize ezinye zilungisiwe, ezinye zine- uhlelo lokuvula olunokuphepha okuphelele. Ukugwema lezo zilwane ezifuywayo kungavulwa ngendlela elula, yize kuliqiniso ukuthi ngeke simelane nakho. Ngakho-ke zombili izinhlangothi zivame ukulungiswa futhi ingxenye emaphakathi ingavulwa futhi ivalwe ngokuthanda, lapho uyidinga.
Ingabe kufanelekile ukuthenga umgoqo wezinja?
Iqiniso ngukuthi yebo, isithiyo senja ngaso sonke isikhathi sikufanele ukuthenga Kepha yebo, kufanele uhlale wazi ukuthi ungakhetha kanjani ukumelana okukhulu abangaba nakho. Ngoba njengoba sishilo ngaphambili, uma sisebenzisana nezinja ezinkulu, sizokhetha inketho enamandla futhi ende noma ebanzi. Ngenkathi kuzoba okuphambene nezinhlobo ezincane. Kepha noma ngabe kuyini, uzoba nesikhala esihlukaniswe kahle lapho ungahlala khona uzolile noma uzolile abangeke bakwazi ukufinyelela kuso. Ngoba yiziphi izithiyo zenja ezinokwethenjelwa kunezinye izindlela zokuhlukanisa.
Ungathenga kuphi umgoqo wezinja oshibhile
kiwiko: UKiwoko ubuye abe nochungechunge lwezithiyo zezinja okungafanele uziphuthe. Ngoba zenziwe ngezinto ezingamelana nazo, ngasikhathi sinye, ezibekelwe odongeni futhi ziyakwazi ukunwebeka. Ukungasho lokho futhi unamamodeli angadingi ukuthi abanjiswe odongeni.
Amazon: Kungenzeka kanjani kube kuncane, e-Amazon ungathola izithiyo ezingapheli zezinja. Ngoba kulapho kuphela lapho uzokwazi ukujabulela lokho kuqeda okukhethayo futhi uhlale ucabanga nge- izidingo ezifuywayo zakho. Izinkuni noma insimbi enobukhulu obuhlukile kuzoba ezinye zezinketho ozohlala uzithola kuwebhu.
ULoyoy MerlinE-Leroy Merlin ungaba nezinketho eziningana ngendlela yemigoqo yezinja. Ngoba banokuphela okumelana kakhulu futhi kunjalo, ama-adapters ukuze zingahlala zivumelanisa isikhala sakho. Kusuka kokuncane kakhulu kuya kulezo ezingaguquguquka noma eziguqukayo.
Tendenimal: Kungenye yezitolo ebingasalanga ngemuva. Futhi bayingxenye ye- Ukukhetha okukhulu ngokwezithiyo kusho ujuthi. Ilungele ukubeka emnyango wezitebhisi noma emnyango. Ukuze sibavikele ekuphunyukeni noma ekulimaleni. Manje kufanele ukhethe okukufanele kakhulu!
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izithiyo zezinja